लाभ र प्लम को हानि - यस यस fleshy रसदार फल प्रशंसक धेरै रोचक हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। यो तपाईंको स्वास्थ्य हानी हुनेछ कि: एक बसिरहेका तपाईं तिनीहरूलाई किलोग्राम भन्दा बढी खान सक्नुहुन्छ सबै पछि, यदि, त्यसपछि ढिलो होस् वा चाँडो रुचि हुन? गरेको बगैचा आलुबखडा छ कि गुण मा एक नजिक हेरौं। लाभ र यो फल को हानि, को पाठ्यक्रम, आफ्नो विशेषताहरु र सुविधाहरू के सिधै निर्भर छन्। गरेको रासायनिक संरचना सुरु, र त्यसपछि यी परिणामहरू कसरी प्रयोग गर्न मा लागौं।
लाभ र प्लम को हानि
अमिलो-मीठा स्वाद, यी फल ताजा र नुनीन बनान, सुकाउने र Boiling पछि (quenching) कारण सम्बन्ध फल एसिड र शर्करा दुवै गर्न peculiar छ। प्लम को लाभ र हानि गर्ने alimentary पर्चा र चयापचय विभिन्न सुविधाहरू मान्छे को लागि धेरै फरक छ।
जैविक एसिड, उदाहरणका लागि, गरिब भोक र साथ व्यक्तिका लागि धेरै उपयोगी छ जो गैस्ट्रिक रस, एक सक्रिय secretion उत्तेजित hypoacid gastritis। तर यी फल (धेरै अरूलाई जस्तै) को अनियन्त्रित प्रयोग को अम्लता संग छैन आवश्यक छ। यो सरल उदाहरण मा, तपाईं प्लम को लाभ र हानि कसरी सापेक्षित हुन सक्छ देख्न सक्छौं।
वजन कम गर्न dieting छन् गर्नेहरूलाई मदत गर्न - (100 ग्राम 42), बोसो को कमी र फाइबर प्रशस्त क्यालोरी एउटा सानो राशि। तर, यो मामला मा, प्लम को लाभ मात्र भने प्रति दिन ग्राम कुनै थप 300 भन्दा छन् ल्याउन सक्छ। र यो दुई पटक मा भाग विभाजन राम्रो छ। साथै, त्यस दिन अन्य मिठाई फल वा सीमा कार्बोहाइड्रेट खान छैन। सबै पछि, आहार मा चीनी (फ्रैक्टोज) को धेरै सुरु गर्न सक्रिय जल बोसो र वजन प्रक्रिया रोक्न सक्षम छ, तपाईं कार्बोहाइड्रेट एउटा सानो, तर स्थिर अभाव सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
उत्तिकै पौष्टिक र नीलो र पहेंलो प्लम - तिनीहरूलाई प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सक्छ कि भिटामिन सी को उपस्थिति मा अझै पनि छ प्रयोग गर्नुहोस्। यो हामी गर्मी को अन्त मा आवश्यक बस के छ। आखिर, सर्दी को रोकथाम अपेक्षित महामारी अघि एक महिना बारेमा सुरु गर्न आवश्यक छ। यो फलाम को धेरै छ किनभने रक्तअल्पता नाली संग संघर्ष पनि राम्रो सहयोगी छ। Antioxidants र जस्ता सेल बुढ्यौली नङ र कपाल खण्ड को delamination को समस्या संग प्रतिस्पर्धा। प्लम मा निहित पोटासियम पनि अन्तस्करणले र उच्च रक्तचाप समस्या को मामला मा उपयोगी छ। पहिले नै फाइबर मा उच्च यी फल उपस्थिति प्रभावकारी कब्जियत र कम आंतों टोन रोक्न मद्दत गर्छ उल्लेख गरे।
गृह कस्मेटिक्स मा नाली प्रयोग
फल Puree - छाला सेतो कि गर्न सक्छन्, moisturize र यो ताजा ठूलो मास्क। यसलाई तयार पार्न पर्याप्त केही नरम पाकेको प्लम सुत्छन् गर्न। फल उपयोगी पदार्थ छाला को pores मा सिधै गिर र टनिक प्रभाव हुनेछ। तपाईं पनि एक आलुबखडा मास्क र बाल बनाउन सक्छ। यो, खुली र फल Mash pitted गर्न, बाक्लो क्रीम को एक dollop र तेल को नै राशि संग मिश्रण। एक घण्टा सहन र कपाल धुनुपर्छ। तिनीहरूले शैली र कोर्नु गर्न सजिलो हुनेछ, रेशमी हुनेछ।
Chilled मासु: प्रविधिलाई, सुविधा र भण्डारण सर्तहरू विवरण
"Activia" थर्मोस्टेट: समीक्षा र समीक्षा
फ्रिज मा मूत्र नमूना तपाईं कत्तिको भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ?
जो मुख्य प्रश्न प्रशंसक वास्तविकता शो गर्न "वास्तविक बच्चाहरु?" बाहिर राख्नु जवाफले
उहाँले नरिवल तेल को एक इंजेक्शन बनाएको पछि Bodybuilder-एमेच्योर, व्यवहार थियो
विस्तारित MTPL बीमा - यो DSAGO (स्वैच्छिक बीमा): अवस्थाको, लाभ र बेफाइदा
माल्टा टापु यात्रा
"Probiz Femina": निर्देशन र प्रतिक्रिया